Guardiola oo shaaca ka qaaday mudada Aymeric Laporte uu ka maqnaanayo garoomada – Gool FM
(Manchester) 28 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday in daafaciisa reer France ee Aymeric Laporte uu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan mudo seddex isbuuc ah sababo la xiriira dhaawac jilibka ah.
Aymeric Laporte ayaa dhaawacmay qeybta hore kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League ay ku booqdeen kooxda Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu.
Tababaraha Manchester City ayaa wuxuu hadalkiisa imaanayaa kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta oo jirmco ah, wuxuuna xaqiijiyay in 25-ka reer France uu maqnaan doono mudo saddex Isbuuc ah ama in ka badan, sida uu hadalka u dhigay.
Pep Guardiola ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu shaaca kaga qaaday:
“Laporte wuxuu maqnaan doonaa seddex isbuuc, in ka badan ama ka yar”.
“Wey adag tahay, laakiin waa inuu si adag u shaqeeyaa, noloshu ma fududa, dadka nool had iyo jeer waxay la tacaamulaan daqiiqado xun”.